HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 16-JUNE-2020
Thursday July 16, 2020 - 11:32:27 in Wararka by Mogadishu Times
Galmudug oo faah faahisay Safarka Mada xweyne Farmaajo ee Dhuusamareeb Madaxweynaha Soomaaliya Md.Maxamed C/hi Farmaajo ayaa la filayaa in uu dhawaan ta go M/Dhuusamareeb ee Caasimada Galmud ug,halkaas oo la filayo inay kulan ku yeeshaan Madax
Galmudug oo faah faahisay Safarka Mada xweyne Farmaajo ee Dhuusamareeb Madaxweynaha Soomaaliya Md.Maxamed C/hi Farmaajo ayaa la filayaa in uu dhawaan ta go M/Dhuusamareeb ee Caasimada Galmud ug,halkaas oo la filayo inay kulan ku yeeshaan Madaxda D/Soomaaliya & Dowlad goboleedy ada. R/Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu ho ggaaminayo ayaa Dorraad tegay M/Dhuusama reeb, isaga oo kulamo gaar gaar ah la yeeshay Madaxda D/goboleedyada marka laga reebo Madaxweynaha Puntland oo dib ugu laabtay M/ Garoowe. Wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shi re Maxamed oo ku magac dheer Falagle ayaa xaqiijiyay safarka madaxweyne Farmaajo ee Dhuusamareeb,waxaana uu sheegay in qaban qaabada soo dhaweynta Madaxweynaha ay ka socoto M/Dhuusamareeb. Waxaa uu sheegay Wasiir Falagle in markii Madaxda D/Goboleedyada ay kasoo laabtaan Aaska R/Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xas an Abshir Faarax oo ka dhacayo Garoowe in xi lliga rasmiga ah uu Madaxweynaha imaanayo Dhuusamareeb lagala shirayo R/Wasaaraha. Ugu dambeyn waxaa uu sheegay W/War faafinta Galmudug in wejiga 2aad ee shirka Dhuusamareeb uu dhici doono waqtiga ugu dhow,isla markaana uu rajeynayo in wax wana agsan ay kasoo baxaan Shirkaasi. Amniga M/Dhuusamareeb ee G/Galgaduud ayaa aad loo adkeeyay,waxaana saacadaha soo soca tegi doona wafdi horudhac u ah sa farka Madaxweyne Farmaajo.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo Maanta la Aasayo
Meydka Alle ha u Naxariiste R/Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo xalay laga soo qaaday dalka turkiga oo uu ku geeriyooday ayaa saakay la keenayaa M/ Muqdisho si salaada janaasada loogu dukado.
Madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo ,G/G/hacabka qaar kamid ah xubna ha 2da Gole ee baarlamanka, xubno katirsan G/Wasiirada ayaa garoonka diyaaradaha ee Aadan-Caadde uga qayb galaya Salaada Janaasada.
Intaasi kadib ayaa meydka R/Wasaarihii ho re ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa waxaa loo qaadayaa M/Garowe ee G/Nugaal si halkaasi loogu Aaso.
Sidoo kale R/Wasaare Xasan Cali kheyre iyo qaar kamid ah Wafdigiisii dhawaan dhuusa mareeb tegau ayaa waxa ay uga qayb galay aan M/Garowe oo ay horay u tagaeen Guddo omiyaha Aqalka Sare iyo qaar kamid Madaxda M/Gobaleedyada oo dhamaantood Aaska ka qayb galaya.
Diyaaraddii ku burburtay garoonka Beledweyn ayaa la sheegay in ay dhac day ka dib markii ay aragtay da meer ku socday jidkii ay ku degi lahayd. Diyaarad oo ay l ahayd shirkadda diyaaradaha Bluebird Aviation oo laga leeya hay Kenya ayaa Dorraad ku dhac day M/Bale dweyne xilli ay cagadhigane ysay.
"Shilkaasi in uu dameer sababay waxaa noo xaqiijiyey shaqaalihi diyaaradda saarnaa, ciidamada AMISOM ee garoonka ku sugan iyo duuliyihi diyaaradda saarnaa intaba,” sida wa xaa xaqiijiyay maamulaha shirkadda diyaarad da Bluebird.
Diyaaraddaasi wuxuu nooceedu ahaa Dash 8-400 oo lagu sameeyey dalka Australia, wax ay dalka Kenya uga diiwangashaned 5Y-VVU. Wuxuu dhaawac fudud gaaray shaqaal ihii saa rnaa. Maareeyaha Guud ee shirkadda diyaara daha Bluebird, Duuliye Xuseen Maxamed, ay aa ka warramay shilkaas iyo waxa sababay.
"Mid ka mid ah diyaaradaha ay shirkaddu lahayd ayaa ku burburtay gudaha Soomaaliya, waxayna siday raashiin loogu talagalay ciidam ada nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM ee ku sugan M/Beledweyne,” ayuu yiri Xuseen.
Diyaaradda burburtay markii ay gaartay ga roonka diyaaradaha Beledweyne, ciidamada Jabuuti oo garoonkaas gacanta ku haya ayaa amar ku siiyey iney soo degto.
"Diyaaraddu waxay subixi hore ka soo kacd ay Jabuuti, markii ay garoonka soo cagadhiga neysay waxaa waddada marayay dameer, diya aradduna waxay ku dhacday dameerki sidaas ayeyna waddadi uga baxday balse shaqaalihi saarnaa way ka badbaadeen shilkaas”.
"Diyaaradda markay cagadhiganeysay oo 200 oo mitir qayaasti ay dhulka u jirtay, dame er ayaa si kedis ah duurka uga soo baxay oo waddadi ay diyaaradda ku dagi lahayd ka gudbay. "Diyaaraddii dameerkii ayey ku dha cday shilkaasina sidaas ayuu ku dhacay. Alxm adulillah 3dii qof oo diyaaraddaas saarnaana wey ka badbaadeen,” ayuu yiri Kabtan Xuseen Maxamed.
Diyaaraddan ayaa noqoneysaa tii 3aad oo laga leeyahay dalka Kenya oo ku burburto gu daha dalka Soomaaliya 3di bilood ee ugu da mbeeyey, iyada oo shilki ugu horreyey uu dhacay 4-ta bishii May.
Shirkadda diyaaradaha Blubird Aviation oo ah shirkad diyaaradeed oo maxalli ah oo laga leeyahay dalka Kenya kana diiwaangashan la ga billaabo 1992-kii waxay ka howlgaleysay gigada diyaaradaha duullimaadyada maxalliga ah ee Wilson.
Diyaarad ay lahayd African Express oo ku dhacday meel ku dhow Bardaale ee dalka So omaaliya waxaa ku dhintay dhammaan lixdi qof ee saarnaa. Xigasho;BBC
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayir naa Suudaan oo ka soo ambabaxay halkaasi
Safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan Amb Maxamed Sh.Isxaaq oo la hadlay SONNA ay aa sheegay inay soo sagootiyeen Muwaadiniin Soomaaliyeed oo arday ay ku jiraan,kuwaasi oo ku xayirnaa in muddo ah Suudaan.
Mas’uuliyiinta DFS iyo Safaaradda Soomaal iya ee Suudaan ayaa ka qeyb qaatay dadaala da dadkaasi Soomaaliyeed dib loogu soo celin ayo. Waxaa lafilayaa in dhawaan ay dalka soo gaarto diyaaradda sidda dadkaasi.
Tan iyo markii cudurka Covid-19 uu dunida sa ameeyay,waxaa kala xayirnaa muwaadiniin ba dan,kadib markii la hakiyay duulimaadyadii, dowladda Soomaaliya ayaana ku guuleysatay inay dalka dib ugu soo celiso muwaadiniin ba dan.
Guddoomiye Mursal” Maamul Goboleedya da go’aan kama gaari karaan qaabka ay noqoneyso doorashada”
Gudoomiyaha G/Sh/Baarlamaanka Soom aaliya, Md.Maxamed Mursal oo Shalay ka hor hadlayay G/Shacab ka ayaa kasoo horjeestay qodoba da qaar ee kasoo baxay Shirkii Madaxda D/Goboleedyada kajira dalka. Waxaa uu sheegay Guddo omiyaha in Madaxda D/Gob oleedyada aysan go’aan ka gaari karin nooca ay noqoneyso doo rashada la fil ayo inay ka dhacdo dal ka,hayee shee Go’aan ka gaarista ay leeyihiin Baarlam aanka.
"Meel ay ku qoran tahay ma jirto xilligaan in la aado doorasho dadban, wixii shuruuc ah ee doorasho lagu aadi lahaa waxaa iska leh Baa rlamaanka malahan D/Goboleedyada ayuu yiri Guddoomiye Mursal”.
Sidoo kale guddoomiyaha waxaa uu she egay in marnaba aysan aqbaleyn in la galo do orasho dadbadan,iyada oo Baarlamaanka ay ansixiyeen sharciga doorashooyinka oo dhiga ya in la qabto doorasho qof iyo Cod ah.
Hadalka guddoomiyaha GGS/Baarlamaanka Soomaaliya, Md. Mursal ayaa u muuqda mid si cad uga hor imaanaya qorsha Madaxda D/Go boleedyada ay ku sheegeen in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof & Cod ah,hayeeshee loo baahan yahay in laga wada tashado sida ay noqoneyso.
Caruur isku qoys ahaa oo ku geeriyoo day dab ka kacay magaalada Boosaaso
Wararka ka imaanaya M/Boosaaso ee G/Bari ayaa waxa ay sheegayaan in carruur is ku qoys ahaa ay ku geeriyoodeen dab ka kac ay guri ku yaallay Magaalada Boosaaso.
Gurigan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa Guri ka samaysan Jiingad isla markaasina ay deganaayeen qoys danyar ahaa iyadoo uu bur bur soo gaaray guryo kale oo ka agdhawaa guriga dabku ka kacay.
Khasaaaha dhimashada ayaa ah Afar Carr uur ah oo 3 ka mid ahi ay ahaayeen Carruur walaalo ah ama hal qoys wada ahaa.
Ilaa iyo hadda lama oga sababta dhalisay in gurigani uu dabku ka kaco, hase yeeshee dad ka deegaanka ayaa waxa ay ku geeleysten in ay baqtiiyaan guriga dabku ka kacay.
Cali Mahdi, Sheekh Shariif iyo Xasan Sh. oo xal u raadinaya Mudullood (Xog)
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa bil laabay kulamo ay xal ugu raadinayaan khilaaf culus oo soo kala dhaxgalay hoggaanka dhaq anka iyo qaar kamid ah siyaasiinta Mudullood, kaas oo ka dhashay arrimo la xariira shirkii baa qday 13-kii bishan.
Madaxweynayaashaan ayaa kulamo gaar gaar ah la qaatay Ugaas Maxamuud Cali Uga as, Senator Muuse Suudi Yalaxow iyo xubno kale oo qeyb ka ah khilaafka oo ay ku jiraan guddiga qaban qaabada ee uu madax u yahay Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale "Madaale”.
Xog ay heshay Caasimada Online ayaa she egaysa in Madaxweyne Xasan Sh.Maxamuud uu Senator Muuse ka dalbaday inuu u tago Ugaaska islamarkaana ka xaalmariyo hadallo kulul oo dhaxmray habeeno ka hor, halka Uga askana uu ka dalbaday inuu qaato kuna samro wax kasta oo uga yimaada dadka Mudullood maadaama uu yahay Ugaaska, islamarkaana ay imaan karaan tabashooyin badan.
Sidoo kale xogta aan helnay ayaa sheegay sa in si gaar ah Madaxweynayaasha u soo xa lin doonaan waxyaabaha keenay muranka iyo doodo ka taagan dadka ka soo qeyb geli do ona shirka oo ka socda Mudullood, kuwaas oo isugu jira mucaarad iyo muxaafad.
Lama oga sida uu ku dhammaan doono khil aafkan oo ah kii ugu adkaa ee soo kala dhax gala xubnahaa ugu sarreeya Mudullood iyo kii ugu adkaa ee soo mara sanadihii ugu damb eeyay, hase yeeshee waxaa la rumeysan ya hay in ay ka dambeyso DF/Soomaaliya oo lac ago waali ah ku harqisay baaqashada shirka.
Taliyaha CXD oo booqday dadkii ku dhaaw acmay weerarkii ismidaaminta
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Odawaa Yuusuf Raage ayaa goobaha caafim aadka ku booqday dadkii rayidka ahaa, ee maalintii Isniinta ku dhaawacmay weerarkii ismiidaaminta ahaa, ee uu ka badbaaday.
Nin la socday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa gaadiid uu la socday Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka ku bartilmaameedsad ay inta u dhaxeyso Isbitaalka Xoogga iyo Isgo yska Tarabuunka ee Magaalada Muqdisho.
Taliyaha CXD ayaa xalay dhaawacyada ku booqday Isbitaalada Madiina iyo Somali Sudan ese, oo haataan xaaladooda caafimaadeed lag ula tacalayo.
Gen.Odawaa, Taliyaha CXDS ayaa mid mid u wareystay bukaanada, waxaana uu Alle uga baryay inuu caafimaad deg deg ahi siiyo.
Inta laga warqabo waxaa weerarkan ku dhin tay 2 qof, oo midi uu yahay ninkii is qarxiyay, halka midka kalana uu yahay qof shacab ahaa, oo xilligii uu qaraxu dhacayay waddada mara ayay.
Weerarkan ayaa waxaa masuuliyadiisa she egatay Al Shabaab, oo dagaal kula jirta DFS, Ciidamada Qaranka iyo Xoogaga Nabad Ilaalin ta M/Afrika, oo joogitaankooda dalka ay ka bi yo diidan tahay.
Alle ha u naaxriistee waxaa xalay Kooxo Bur cad K/Afrikan ah ay Tuulada Retreat oo ku taal la M/Cape Town ku dileen Muwaadin Soomaa liyeed oo kamid ahaa dadka ganacsi ahaan u tegay dalkaas, iyaga oo goobta ka baxsaday.
Muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magac aabi jiray Axmed Xuseen Caddow ayaa ehel ladaiisa waxaa ay sheegeen in rag hubeysan ay rasaas ku fureen xilli uu ku dhex-jiray Gaa rigiisa oo yaallay Goob Ganacsi uu lahaa horte eda.
Majirin agab ay ka qaateen Muwaadinka So omaaliyeed ay dileen Kooxaha Burcadda K/ Afrikanka ah,hayeeshee Goobta waxaa tegay Ciidamo ka tirsan booliska Koonfur Afrika, hayeeshee aysan ku guuleysan inay gacanta ku dhigaan dakii ka dambeeyay dilkaas.
Sanadkaan 2020 ayaa wadanka K/Afrika wa xaa dil iyo dhaawac loogu geystay in ka badan 20 Ruux oo Soomaali ah,kuwaas oo ilaa iyo ha dda dilkooda aan dad loo qaban,sidoo kalena aysan ka hadlin D/Soomaaliya &K/Afrika
Xildhibaan Dalxa "Annaga oo dhan waxaa naga buuxa Kalluundiyaal siyaasadeed”
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tir san Xildhibaanada G/Shacabka ayaa ka hadl ay ayaa ka hadlay Safarkii Dorraad M/Dhuus amareeb uu ku tegay Guddoomiye xigeenka 2aad ee G/Sh Md.Mahad Cawad.
Xildhibaan Dalxa oo ka hadl aayay kulankii Shalay ee Xildh ibaanada ayaa waxaa uu shee gay in Guddoomiye Mahad Ca bdala Cawad uusan Dhuusa mareeb ku tegin Casuumaad loo soo diray, hayeeshee uu iska tegay, taasina ay tahay arr in wanaagsaneyn
"Qof aan sab laga wicin taga reer Banaadir waxay dhahaan Kalluundi, Guddoomiye ku-xi geenka kaliya ma eedeynayee annagoo dhan baa waxaa naga buuxa Kalluundiyaal siyaasa deed ah, marka aan iska deyno kalluundinim ada” ayuu yiri Xildhibaan Dalxa.
Isaga oo sii hadlaayay ayuu tilmaamay in sareeynta sharciga Dalka ay ka awood badis ay sarreeynta Arrimaha Siyaasadda dalka, isa goo xusay in muhiim ay tahay in la ilaaliyo sarr eynta sharciga dalka.
Guddoomiye Mahad Cabdala Cawad ayaa ka mid ahaa wafdigii Dorraad R/Wasaaraha XFS Md.Kheyre u raacay M/Dh/mareeb, waxa ana Kheyre uu halkaas uga qeyb geli doonaa Shirka Madaxda DF& Maamul Goboleedyada uga furmayo maalmaha soo socda.
Maamulka G/Banaadir oo soo bandh igay natiijo ka soo baxday SAHAN la sameeyay
Maamulka G/Banaadir ayaa Shalay oo Arb aco Aheyd waxaa uu soo bandhigay natiijo ka soo baxday SAHAN dadweyne oo laga same eyay M/Muqdisho. Sahankaan ayaa ku saa bsanaa Caabuqa Karoono 19 iyadoo dadwey naha su’aalo laga weydiinayay waxa ay u yaqaanaan CV19 iyo sida uu Sameynta ugu yeeshay noloshooda caadiga ah.
Sahankaan ayaa laga sii daayay ilaa 5 Wa rbaahin oo maxalli ah halkaas oo ay dadka ku soo diriyeen fariimo ay uga soo jawaabayeen su’aalihii la weeydiiyay ee ku saabsanaa COVID-19.
Sida ka muuqatay natiijada Saha nka, dadka intooda badan ayaa aqoon u lahaa Caabuqa CV19 taasoo tusinay sa in maamulka G/Banaadir uu si mug leh u sa meeyay wacyigalin ballaaran oo ku aadaneed COVID-19, sida lagu sheeg ay War kasoo baxay Maamulka Gobolka Banaadir.
Aas Qaran oo loo sameeyay Madaxweynih ii hore ee Puntland
Qabuuro ku yaalla M/Garoowe ee Xarunta G/Nugaal ayaa waxaa Shalay oo Arbaco aheyd Aas qaran loogu sameeyay Madaxwey nihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi.
Aaska Marxuum Maxamed Xaashi ayaa wa xaa ka qeyb galay Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi C/i, Madaxweyneyaasha maamul Goboleedya da Jubbaland, Galmudug, Puntland, Culimo, iyo Ehelada Marxuumka.
Dhammaan Mas’uuliyada ka qeyb galay Aaska Madaxweynihii hore ee Puntland Maxa med Cabdi Xaashi ayaa waxaa ay dhamaant ood tacsi u rideen Ehelada Marxuum ka, sidoo kalena Alle uga baryay inuu Janada ka waraa biyo.
Maxamed Cabdi Xaashi ayaa ku geeriyood ay M/Nayrobi dalka Kenya, isagoo kaalin mug leh ka soo qaatay aas-aaska D/G/Puntland, isa ga oo noqday Madaxweynihii 2-aad iyo sidoo kale Madaxweyne Ku-xigeenkii ugu horeeyey ee hoggaamiya dowlad-goboleedkaasi.
Mareykanka oo ka hadlay diyaaraddii Dorra ad ku soo dhacday Beledweyne
Safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay So omaaliya ayaa war ka soo saaray diyaaraddii Dorraad ku bur burtay M/Beledweyne ee xar unta G/Hiiraan. Warkanka ka soo baxay xafiis ka Safaaradda Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in nasiib darro ay ahayd soo dhicit aankii ay soo dhacday diyaara dda
Sidoo kale waxaa lagu sheeg ay in Mareykanku uu ku faraxs an yahay in shilkaasi diyaarad eed aysan ka dhalan khasaare nafeed isla markaasina waxaa loogu mahadcel iyay dadkii ka qayb qaatay badbaadinta shaqa alihii diyaaradda saarnaa. Diyaaradda shilka gashay ayaa waxaa la sheegay inay saarnaay een raashin gar gaar ah oo ka timid D/areykan ka si uu ugu caawiyo Shacabka Somaliyeed.
Ugu dambeyntii qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in Mareykanku uu marwalba garab ta gan yahay dhammaan Shacabka iyo DFSdhin ac walbana uu ka taageeri doono.
Dowladda Soomaaliya oo Wafdi xaqiiqo raa din ah u direysa Beledweyne